El Cotopaxi, nnukwu njem site na Quito | Akụkọ Njem
Ugwu Cotopaxi, njem dị ukwuu sitere na Quito
Ndị mmadụ na-eme njem ịga Ecuador ịga leta Galapagos Islands, paradaịs ikpeazụ dị n'Earthwa. Obodo Andean ka amachaghị na njem ndị Europe na ọ bụ ihe ihere ebe ọ bụ na ala bụ oke mma pụrụ iche ma nwee ọtụtụ ihe ị ga-enye.
Taa m na-amam njem mmụta sitere na Quito, mgbago na Cotopaxi. Ọ bụ ahụmịhe m na akwadoro gị ma ọ bụrụ na ị gaa Ecuador. Gaghị enwe mmechuihu (ọ bụrụ na ọrụ mgbawa ga-enye ya ohere).
Imirikiti njem, dị ka nke m na-akọwa n'okpuru, enwere ike ịmalite site na Quito ma ọ bụ Latacunga wee laghachi otu ụbọchị.
Ugwu Cotopaxi (5897 masl) biliri n'ụzọ di ebube naanị 50 kilomita site na isi obodo na 35 site na Latacunga. Ọ bụ ugwu nke abụọ kachasị elu na mba ahụ na otu ugwu mgbawa kacha elu n'ụwa.
1 Etu esi enweta ugwu ugwu Cotopaxi?
2 Kedu ihe ị ga-eme na ihe ị ga-ahụ na Cotopaxi?
3 Downhill na ngagharị na Mountain Bike!
Etu esi enweta ugwu ugwu Cotopaxi?
Visitga leta na ịbanye Cotopaxi National Park ọ dị mkpa iku ọrụ nke ụlọ ọrụ pụrụ iche. Ekwesiri iburu n'uche ya, ma odi oke nkpa, na Quito na ogige mba di na elu nke ihe kariri mita 2500 na ebe ikpeazu ebe ugbo ala ma obu ugboala nwere ike iru bu ihe ruru mita 4200. Ọrịa dị elu bụ otu ihe a ga-atụle tupu ime njem mmụta ahụ.
Anyị ga-enwerịrị ike ụbọchị ole na ole tupu anyị arịgo, na-aga site na obodo dị n'oké osimiri ruo Cotopaxi ozugbo nwere ike bụrụ ihe na-emerụ ahụ ike.
Ekwadoro m ka ị weta otu kalama mmiri, akwa ugwu na akpụkpọ ụkwụ, gloves na karịa ihe niile: emela oke mgbalị. Ọ bụ ọrịrị dị mfe ma nwayọ nwayọ, na mita 4200 nke elu ọ na-aga nwayọ nwayọ, anaghị agba ọsọ.
Enwere abụọ isi nhọrọ iji nweta ya:
Njem na transportgbọ njem ọha ma ọ bụ nke onwe si Quito / Latacunga gaa n'okporo ụzọ nnweta gaa n'ogige dị n'okporo ụzọ awara awara nke Pan-American. Ozugbo anyị ruru, anyị achọtala ọtụtụ ụgbọ ala 4 × 4 nke anyị nwere ike iji mee nleta ahụ. Ha kwesịrị ịbụ ụlọ ọrụ nwere ikike ịnweta. Ọ bụ n'ezie ndị dị ọnụ ala (ihe dị ka $ 50 kwa onye) na ụzọ na-adịghị mma, mana ọ na-ala oge n'iyi. Ebe ikpeazụ nwere ike ịnweta na-enweghị mkpa maka ikike ma ọ bụ ntuziaka pụrụ iche bụ Cotopaxi Visitor Center.
Hụ ụzọ si Quito / Latacunga. Ndị ụlọ ọrụ ahụ na-enye ụgbọ ala 4 × 4 na onye ọkwọ ụgbọ ala na nduzi ugwu. A na-eme njem mmụta ahụ n'otu ụbọchị ma gụnyere nri na ịnyịnya ígwè iji gbadata ugwu mgbawa ya. Ntuziaka ahụ bụ maka inye ihe ngosi 4 dị mkpa, akụkọ ihe mere eme nke ugwu mgbawa na ogige mba ya. Gwọ kwesịrị ịdị gburugburu $ 75 na $ 90 kwa onye.
Achọrọ m ijide nleta site na Quito. O nwere ike ịbụ ihe dị oke ọnụ, mana ịhapụ 8 nke ụtụtụ n'ihe dị ka 11, ị ga-ahụ onwe gị n'etiti ogige mba ahụ. Site na oge nri abalị ị ga-alaghachi n'obodo. N'aka nke ọzọ, ọdịda nke Mountain Bike site na ugwu mgbawa bụ 100% akwadoro.
Rịgo elu na-achọ opekata mpe ụbọchị 2, ịrịgo na mbido glacier nwere ike ime n’otu ụbọchị.
Kedu ihe ị ga-eme na ihe ị ga-ahụ na Cotopaxi?
Ọ bụrụ na ihu igwe na ugwu mgbawa kwere ya, ị ga-enwe ike iru ebe ikpeazụ ị na-adọba ụgbọala, nke dị na elu nke 4200 mita. N'ebe ahụ, ị ​​ga-ahụrịrị mgbanwe nke ọnọdụ okpomọkụ na ịdị elu.
Ntuziaka ahụ ga-agwa anyị ma ọnọdụ ndị a kachasị mma ịrịgo na etu anyị nwere ike ịrịgo. Ọ dị mkpa ịgbaso ndụmọdụ ha n'oge niile.
Site na nke a anyị na-ahụrịrị ugwu mgbaba dị elu, nke dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 4900 n'elu ọkwa mmiri na n'azụ nnukwu glacier amalite.
Zọ a kara akara nke ọma na ndagwurugwu dị mkpa ga-eduga anyị ịrịgo mita 600/700 fọdụrụ. Na tiori na 1 awa ma ọ bụ otu awa na ọkara ị kwesịrị iru ebe mgbaba.
Ala ya bu ugwu mgbawa ma na-amị amị. Ọtụtụ ugboro abụọ nzọụkwụ na-iwere elu na-enweghị na-achọ ime otú ọzọ atọ na-lowered. Ọ dị mkpa inwe ndidi, ọ bụghị ịgba ọsọ na inwe obere obere obere. Ọ dị ezigbo mkpa ị toụ mmiri mgbe niile ma mee ka elu ugwu ahụ dị elu.
Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, mgbe otu awa gachara, anyị ga-abata na ebe mgbaba ebe anyị nwere ike ịtụgharị uche na echiche ndị dị egwu (ogige mba, lagoons na ikpo okwu Andean) na elu (Cotopaxi glacier na oghere). Otu mgbe anyị nwere ike ịme ọtụtụ mkpebi dabere na oge dị, ọnọdụ anụ ahụ na ihu igwe:
Agbagola ma laghachite ebe a na-adọba ụgbọala.
Gbagogo na mbido glacier, nke di n ’mita 5300 n’elu elu oke osimiri. Ọ bụ njem na-erughị otu awa ma enwere ike ịme ya ma anyị ga-ehi ụra ebe mgbaba ma ọ bụ na anyị laghachi na ebe mmalite.
Gbagoo na ndagwurugwu ahụ. N'okwu a, anyị ga-enyocha ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịrịgo n'ụzọ anụ ahụ na n'aka nke ọzọ anyị ga-anọ ọnọdụ abalị na ebe mgbaba, ọ gaghị ekwe omume ịme ihe niile n'otu ụbọchị.
Downhill na ngagharị na Mountain Bike!
Ọ bụrụ na anyị ejiri ụgbọ ala na otu igwe, Anyị na-akwado kpam kpam ịlaghachi n'ọdụ ụgbọ ala na Mountain Bike. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1 awa nke mgbe niile si na 4200 mita gaa 3500.
Okirikiri ala, ọdịdị na ịma mma ya n'ụzọ niile. Mmetụta nke nnwere onwe siri ike ijikọ.
Ntuziaka ga-egosi gị ebe ị ga-emecha nrịgo ahụ. Site na ebe anyị nwere ike inyocha ịnyịnya ígwè na Cotopaxi National Park niile. Mbara ala, lagoons, ọdịdị na ala ahịhịa ga-achịkwa njem anyị.
Ozugbo njem igwe kwụ otu ebe anyị gwụchara, ọ ga-abụ oge iji laghachi ebe anyị bidoro.
Maka ndị hụrụ okike n'anya, ịrịgo ugwu ugwu ugwu Cotopaxi bụ njem a na-atụ aro ya ma dịkwa mfe ịnweta ma ọ bụrụ na anyị gaa Quito. Ecuadorian Andes dị egwu ma nwee ụzọ maka ihe masịrị gị niile, mana nke a dị mkpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Ecuador » Ugwu Cotopaxi, njem dị ukwuu sitere na Quito
Were njem ụgbọ mmiri na osimiri Danube
3 nke osimiri kacha mma na Andalusia